हवाई उडान असार १७ देखि, सार्वजनिक बस कहिले ? « GDP Nepal
हवाई उडान असार १७ देखि, सार्वजनिक बस कहिले ?
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक हवाई उडान असार १७ गतेबाट सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको छ । कुल उडान सङ्ख्याको ५० प्रतिशतले नबढ्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छ।
तर, आन्तरिक उडान सुरु हुने भए पनि सार्वजनिक बस सञ्चालनको कुनै अत्तोपत्तो छ्र्रैन । हवाईजहाज पूर्ण क्षमतामै सञ्चालन हुँदा सुरक्षित मान्ने सरकारले सार्वजनिक बसमा भने असुरक्षा देखेको छ । यातायात व्यवसायीले यसअघि नै मापदण्ड पालना गरेर बस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छैन ।
त्यसो त सरकारले जहाज चढ्ने र बस चढ्नेमाथि विभेद पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छ । जहाजका यात्रुको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनु राम्रो भए पनि बसमा भने विभेद नै छ । सार्वजनिक बसलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको कुनै प्रयास देखिँदैन ।
हवाई उडानमा सबै जहाज सञ्चालन गर्न नपाउने तर सञ्चालनमा रहेका जहाजले भने सीटभरी यात्रु ओसार्न पाउने अनौठो निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय हवाई व्यवसायीहरुको स्वार्थमा ल्याएको देखिन्छ ।
अहिले आन्तरिक उडान सञ्चालन भइहाले पनि पर्यटन लगायतका क्षेत्र ठप्प रहेकाले आधा उडान पनि त्यत्ति सम्भव देखिँदैन । त्यसैले सरकारको निर्णयको अर्थ नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यद्यपि, सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना जटिल भए पनि असम्भव भने छैन । अत्यावश्यक काम हुनेले मात्र यसको सेवा लिने भएकाले तत्काल खोल्नु उचित देखिन्छ । तर, सरकारले व्यवस्थापनको जटिलता भन्दै यो क्षेत्र खुलाउने तयारीसमेत गरेको छ्रैन ।